1 Tantara 15 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 15
Ny namindrana ny fiara ho ao Jerosalema.
1Ary Davida nanao trano ho azy tao an-tanànan'i Davida, dia nanomana fitoerana ho an'ny fiaran'Andriamanitra, ka nanorin-day ho azy.
2Hoy Davida tamin'izay: Tsy misy afa-tsy ny Levita ihany no hitondra ny fiaran'Andriamanitra, satria ireo no voafidin'ny Tompo hitondra ny fiaran'Andriamanitra sy hanao ny fanompoana momba azy mandrakizay. 3Dia novorin'i Davida tao Jerosalema Israely rehetra hampiakatra ny fiaran'ny Tompo ho ao amin'ny fitoerany, izay efa nomaniny ho azy. 4Novorin'i Davida ny taranak'i Aarona sy ny Levita; 5tamin'ny taranak'i Kaata: Oriela lehibe sy ny rahalahiny, roapolo amby zato; 6tamin'ny taranak'i Merarì: Asaià lehibe sy ny rahalahiny, roapolo sy roan-jato; 7tamin'ny taranak'i Gersoma: Joela lehibe sy ny rahalahiny, telopolo amby zato; 8tamin'ny taranak'i Elisafàna: Semeiasa lehibe sy ny rahalahiny, roan-jato; 9tamin'ny taranak'i Hebrona: Eliela lehibe sy ny rahalahiny, valopolo; 10tamin'ny taranak'i Oziela: Aminadaba lehibe sy ny rahalahiny, roa ambin'ny folo amby zato.
11Nantsoin'i Davida ny mpisorona Sadaoka sy Abiatara, ary ny Levita, Oriela, Asaiasa, Joela, Semeiasa, Eliela ary Aminadaba. 12Ka hoy izy tamin'ireo: Hianareo, loha fianakavian'ny Levita, hamasino ny tenanareo, dia hianareo sy ny rahalahinareo, ka ampiakaro ny fiaran'ny Tompo Andriamanitr'Israely ho eo amin'ny fitoerana nomaniko ho azy. 13Fa satria noho hianareo tsy nampiakatra azy tamin'ilay voalohany, no nikapohan'ny Tompo Andriamanitsika antsika, satria tsy nitady azy araka ny lalàna isika.
14Dia nanamasin-tena ny mpisorona sy ny Levita, mba hampiakatra ny fiaran'ny Tompo Andriamanitr'Israely. 15Ary ny taranak'i Levì, dia nilanja ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny baony, araka ny nandidian'i Moizy, araka ny tenin'ny Tompo.
16Nasain'i Davida notendren'ny lehiben'ny Levita ny rahalahiny mpihira miaraka amin'ny zava-maneno, dia ny valiha, ny harpa, ny kipantsona, hampaneno azy amin'ny feo mikarantsana sy maneho hafaliana. 17Ka dia notendren'ny Levita Hemàna zanak'i Joela, ary tamin'ireo rahalahiny Asafa zanak'i Barakiasa; tamin'ny taranak'i Merarì rahalahiny, Etana zanak'i Kosaià; 18naman'ireo ny rahalahiny, amin'ny ambaratonga faharoa: Zakaria, Bena, Jaziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Banaiasa, Maasiasa, Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, ary Jehiela, mpiandry varavarana. 19Hemàna sy Asafa ary Etàna mpihira, dia nitondra kipantsona varahina, hampanenoina. 20Zakaria, Oziela, Semiramota, Jahiela, Anì, Eliaba, Maasiasa, ary Banaaisa nanana valiha alamota. 21Matatiasa, Elifalò, Maseniasa, Obededoma, Jehiela ary Ozazio, nanana harpa amin'ny octave, hitari-kira. 22Koneniasa, lehiben'ny Levita momba ny fitondrana ny fanaka no nitarika ny fitondrana, fa nahay izany izy. 23Barakiasa sy Elkanà, no mpiandry varavarana teo akaikin'ny fiara. 24Sebeniasa, Josafata, Natanaela, Amasaì, Zakaria, Banaiasa, ary Eliezera mpisorona, no nitsòka anjomara teo alohan'ny fiaran'Andriamanitra; Obededoma sy Jehiasa no mpiandry varavarana teo akaikin'ny fiara.
25Dia niainga Davida sy ny loholon'Israely ary ny tompon'arivo, hampiakatra ny fiaran'ny faneken'ny Tompo tao an-tranon'i Obededoma tamin'ny fifaliana. 26Rahefa nomban'Andriamanitra fanampiana ny Levita izay nitondra ny fiaran'ny faneken'ny Tompo, dia namono ombalahy enina sy ondralahy enina natao sorona ny olona. 27Nitafy kapaoty bisosa Davida; torak'izany koa ny Levita rehetra nitondra ny fiara, ny mpihira ary Koneniasa izay nitarika ny fitondrana ny fiara, eo amin'ny mpihira; ary Davida nitafy ny efoda rongony madinika. 28Israely rehetra no indray nampakatra ny fiaran'ny faneken'ny Tompo tamin'ny hobin-kafaliana, tamin'ny feon'anjomara amana bingona mbamin'ny kipantsona. 29Nony tonga hatrany an-tanànan'i Davida ny fiaran'ny faneken'ny Tompo dia nitsirika teo am-baravarankely Mikola zanakavavin'i Saola, ka nony nahita an'i Davida nitsinjaka sy nandihy izy, dia nikizaka azy tao am-pony. >